Ninka 3-aad ee adduunka ugu taajirsan oo iibsanaya AC Milan | Hadalsame Media
Qaxootigii ugu horreeyey ee uu Jarmanku kasoo qaaday Giriigga oo dalkaa…
Home Ciyaaraha Ninka 3-aad ee adduunka ugu taajirsan oo iibsanaya AC Milan
Ninka 3-aad ee adduunka ugu taajirsan oo iibsanaya AC Milan
(Milano) 15 Sebt 2019 – AC Milan ayaa u muuqata mid markale la iibin doono, waxaana markan xiisaynaya dalladda shirkadaha ee Louis Vuitton Group. Bernard Arnault, oo ah milkiilaha LVMH-Louis Vuitton ayaa la sheegay inuu diyaar la yahay 1 bilyan oo euro oo uu kooxda ugala wareego Elliott Management Corporation.
Waa ayo “Lvmhil-Louis Vuitton” Group?
Waa sharikadda dunida ugu ballaaran ee ka ganacsata waxyaabaha lagu raaxaysto waxayna gacanta ku haysaa ilaa 70 brand. Arnault oo ah bilyaneerka iska leh wuxuu dhowaantan Warren Buffett (ganacsade Maraykan ah) kala baxay kaalinta 3-aad ee ninka dunida ugu taajirsan, isagoo haatan ka dambeeya uun Jeff Bezos (milkiilaha Amazon) iyo Bill Gates (asaasaha Microsoft).
Arnault waa ganacsade Faransiis ah oo haysta adduunyo dhan 94.6 bilyan oo doollar, waana nin jecel farshaxanka iyo fanka qadiimiga ah.
Sida ku qoran Il Messaggero, wuxuu ninkani todobaadyadii tegey bilaabay qorshe uu ku doonayo inuu ku iibsado AC Milan, isagoo diyaar ah dhamaadka fasal-ciyaareedkan (Maajo 2020).
Ninkan ayaa la sheegay inuu doonayo inuu wado mashruuc han sare leh, isagoo kooxda kusoo biirinaya iidhehyo (sponsorships) waawayn, taasoo ay sahlayso inuu gacanta ku hayo ilaa 70 sharikadood oo uu isagu leeyahay, waana mid aad u kordhinaysa dakhliga ay kooxdu u baahan tahay.
Previous articleDHEGEYSO: Xeerka kireeynta gacanta labaadka oo is bedel lagu sameeyey!
Next articleGabdhaha ku jira Komoondooska Ingiriiska oo xamili waayay tababarkii adkaa ee la sameeynayay + Sawirro
Qaxootigii ugu horreeyey ee uu Jarmanku kasoo qaaday Giriigga oo dalkaa gaarey + Sawirro
(Berlin) 01 Okt 2020 - Qaxootigii ugu horeeyay ee Jarmalka uu ka soo qaatay Dalka Gariiga gaar ahaan dadkii ku noolaa xerada qaxootiga ee...